China Cementitious capillary crystalline waterproofing mkpuchi Manufacturers na Suppliers | Hongyuan
Cementitious capillary crystalline waterproofing mkpuchi Ọ bụ a akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi-echebe na ogologo oge waterproof, corrosion na-eguzogide mgbochi ịka nká na ígwè nchebe. Nwere ike ijupụta 2nd ugboro na onwe-imezi. Easy na ngwa ngwa itinye, na-abụghị ebe obibi. Biogo TM Cementitious capillary crystalline waterproofing mkpuchi bụ a na agba ntụ mealy mkpuchi, na chemical ifịk mejupụtara kwukwara na ndị nkịtị Portland ciment dabeere. Ya edinam ụkpụrụ bụ tumadi na-aza na porosity, n'okpuru ...
Ọ bụ a akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi-echebe na ogologo oge waterproof, corrosion na-eguzogide mgbochi ịka nká na ígwè nchebe. Nwere ike ijupụta 2nd ugboro na onwe-imezi. Easy na ngwa ngwa itinye, na-abụghị ebe obibi.
Biogo TM Cementitious capillary crystalline waterproofing mkpuchi bụ a na agba ntụ mealy mkpuchi, na chemical ifịk mejupụtara kwukwara na ndị nkịtị Portland ciment dabeere. Ya edinam ụkpụrụ bụ tumadi na-aza na porosity, n'okpuru ihe nke mmiri, chemical ifịk mejupụtara nwere ike infiltrate n'ime n'elu mgbe mkpatụ ka unyi anaghị agbasa na crystal, dị ka ettringite. The chemical ifịk mejupụtara nwere ike mbo mbuli hydration ciment, akpụ dị ukwuu nke kristal jupụta chakoo. Mgbe ahụ mmiri ike ijupụta n'ime cement izute waterproofing ebumnobi.
Biogo TM Cementitious capillary crystalline waterproofing mkpuchi nwere ezi simenti onwunwe, a ọma workability na-eji ire ụtọ akwụkwọ ụgbọelu, burr akwụkwọ ụgbọelu, n'èzí akwụkwọ ụgbọelu, n'ime akwụkwọ ụgbọelu, akọrọ akwụkwọ ụgbọelu, udu mmiri akwụkwọ ụgbọelu ma ọ bụ mmiri akara akwụkwọ ụgbọelu.
Ọ nwere ike n'ọtụtụ ebe, na-eji na ọwara, dam, esite, ike osisi, nuklia ike osisi, jụrụ ụlọ elu, viaduct, akwa, runway, ikpo ntọala, wastewater ọgwụgwọ owuwu, obodo injinịa na ndị ọzọ ihe na-ewu waterproofing.
Previous: Ịgba Polyurea Elastomer Protection mkpuchi
Osote: Ịgba ngwa ngwa hardening roba bitumen waterproof mkpuchi
Ugboro abụọ akụrụngwa Polyurethane Waterproof mkpuchi
Otu akụrụngwa Polurethane Waterproof mkpuchi
Polyurethane Waterproof mkpuchi
Pu Waterproof mkpuchi
Single akụrụngwa Polyurethane Waterproof mkpuchi
Acryli Waterproof mkpuchi, Liquid Waterproofing, Single-Ply Roofing Membrane, Matala acryli Waterproof mkpuchi, Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Tpo Waterproof akpụkpọ,
Tpo Waterproof akpụkpọ, Single-Ply Roofing Membrane, Matala acryli Waterproof mkpuchi, Liquid Waterproofing, Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Acryli Waterproof mkpuchi,